Chombo quits Mujuru, applies to rejoin Zanu PF? - The Zimbabwean
Chombo quits Mujuru, applies to rejoin Zanu PF?
Former Vice-President Joice Mujuru’s National People’s Party (NPP) women’s assembly chairperson Marian Chombo, is reported to have applied to join Emmerson Mnangagwa’s ZANU PF party.
Ms Chombo claims she was forced out of the party by her ex-husband and former Finance Minister Ignatius Chombo.
The state owned Herald says it has a letter written by Ms Chombo to the Zanu-PF Mashonaland West chairperson in which she is applying to be re-admitted in the party.
Provincial vice chairman Keith Guzah confirmed to the paper that the Mashonaland West provincial executive was inundated with people from different political persuasions requesting to be readmitted to the ruling party.